Kilalaon’i Aliyev, na Fandraisana ireo Gadra Politika ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2016 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, русский, Ελληνικά, English
Filoha Aliyev mihaona amin'ny filoha Rosiana, Putin tamin'ny taona 2014. Sary ofisialin'ny fitondram-panjakana Rosiana.
Tia zavatra lafo vidy ny Filoha Ilham Aliyev ao Azerbaijan: tetikasa fanorenana goavana, tia mampiantrano fifaninanana fanatanjahatena ary ny fandaharana raitra Eurovision.
Iray amin'ireo fananana sarobidy indrindra an'ity mpanao didy jadona ity sy ny fitondrany angamba ny gadra politika ao Azerbaijan, izay tsy mitsahatra ampiasaina ho fitaovana fifampiraharahana ataon'i Aliyev amin'ny Tandrefana
Alohan'ny diany ho any Washington DC hamonjy ny Vovonana momba ny Indostria Nokleary amin'ny faran'ny volana, sy ny teritery avy any ivelany manoloana ny famerana tsy mitsaha-mikatona kokoa amin'ny zon'olombelona, nanapa-kevitra hamoy ny sasany amin'ireo fananany amin'ny famelana ny helok'ireo gadra politika lehibe 14 i Aliyev. Rashadat Akhundov, Mahammad Azizov ary Rashad Hasanov mpikatroka ao amin'ny N!DA, Siraj Karimli sy Omar Mammadov bilaogera, Akif Muradverdiyev manampahefana teo alohan'ny fitondrana; Nemat Penahli filohan'ny antoko Mahafirenena Nasionaly; Yadigar Sadigov mpikatroky ny antoko Musavat, Parviz Hashimli, Hilal Mammadov ary Tofig Yagublu mpanao gazety, Taleh Khasmammadov sy Anar Mammadli mpiaro ny zon'olombelona: .
Ny raharahan'ireo mpikatroka N!DA no nahasarika indrindra ny sain'ny iraisampirenena raha nosamborina tamin'ny Martsa 2013 ireo tovolahy valo (tafiditra amin'izany ireo telo navotsotra) noho ny fampiasana media sosialy mba hikarakarana andiana fihetsiketsehana manoloana ny fitomboan'ny fahafatesan'ireo miaramila zazavao noho ny fepetra mafy sy ny herisetra anatin'ny toby miaramila ao Azerbaijan. Tamin'ny Septambra 2013, voampanga ho nikarakara fitroaram-bahoaka miaraka amin'ny herisetra, fandravana, fandoroana, sy fanimbana fananana izy ireo.
Tranga iray hafa miavaka kosa ny an'i Anar Mammadli, filohan'ny Foibe Fanaraha-masom-pifidianana sy Fikarohana momba ny Demokrasia, izay nampidirina am-ponja tamin'ny Desambra 2013 noho ny fiampangana azy tamin'ny fandosiran-ketra, fandraharahana tsy ara-dalàna (tsy nahazo alalana ara-dalàna) sy “fanararaotam-pahefana”, nilazana fa nikasa hitsabaka tamin'ny voka-pifidianana izy.
Iray amin'ireo miharihary tsy tafiditra ao anaty lisitry ny gadra nahazo famelan-keloka kosa i Khadija Ismayilova, mpanao gazety ambony mpanohitra ny kolikoly izay narovan'ilay mpisolovava malaza Amal Clooney, migadra 7 taona sy 5 volana an-tranomaizina izy noho ny fiampangana ahiahian'ny maro fa namboamboarina. Mbola maro ireo tranga lehibe tokony fantarina.
Na dia teo aza ny famotsorana dia noho ny antony ara-politika – tahaka ireo fiampangana voalohany – nenti-nandravahana ny fety Nowruz, fety ankalazaina amin'ny hafanam-po miavaka ao Azerbaïdjan, Iran ary manerana an'i Azia Afovoany, ny famotsorana ireo 14.
Nitsidika (lahatsary) ny tranon'ireo gadra politika navotsotra ny tolotra i Azadliq mpiasan'ny RFE / RL Azerbaïdjan.
Rashadat Akhundov, nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny taorian'ny famotsorana azy:
Tapitra ny fanaovana takalon'aina anay. Afaka izahay izao! Maniry fahafahana ho an'ny namantsika rehetra mbola tafajanona any am-ponja aho.
Anar Mammadli, filohan'ny Foibe Fanaraha-maso ny fifidianana sy Fikarohana momba ny Demokrasia nanoratra tao amin'ny Facebook-ny fotoana fohy taorian'ny famotsorana azy:
Ry namana! Tafaraka ihany isika nony farany taorian'ny 27 volana tany am-ponja. Misaotra ny rehetra nandray anjara tamin'ny ady ho fahafahana sy ny fianakaviana sy ny namana aho! Nanana fahafahana niresaka sy nahita ny maro taminareo aho tao anatin'izay roa andro izay. Misaotra tamin'ny firarintsoa sy ny fiarahabana feno fitiavana! Indrisy, faly isika nefa malahelo ihany koa. Ny anton'izany dia ireo namantsika mbola tavela any am-ponja. Marobe ny miandry antsika, satria hiasa hiantoka ny famotsorana ireo gadra politika rehetra isika ary hanaisotra ny sakana ara-politika rehetra. Tsy maintsy mandroso isika!
Nanana teny vitsivitsy holazaina ihany koa ilay mpamorona ny Hira an'ny Demokrasia, Kanto ho an'ny Demaokrasia ary Fanatanjahantena ho fanentanana momba ny Zon'Olombelona, Rasul Jafarov taorian'ny famotsorana azy:
Ry namana, miarahaba anareo rehetra aho. Araka ny fantatrareo rehetra, aty an-trano aho ary tena faly satria afaka. Ny fihetseham-po iainako ankehitriny dia nampahatsiahy ahy ny tena dikan'ny hoe fahafahana sy ny maha-zava-dehibe izany. Mino aho fa ho avotsotra tsy ho ela ihany koa ny namantsika Intigam Aliyev, Khadija Ismayil, Ilgar Mammadov sy ny sisa hafa ary vonona hanao izay rehetra azoko atao ho amin’ izany aho. Manantena ny hahita anareo rehetra sy hitafatafa …
Navoakan'i Rasul Jafarov tamin'ny Alakamisy 17 Martsa 2016
Navotsotra ihany koa ilay mpanao gazety Rauf Mirkadirov voampanga fa nanao fitsikilovana, na dia tsy nahazo famotsoran-keloka ofisialy aza. Novain'ny fitsarana ao Baku dimy taona sazy mihantona kosa ny sazy enin-taona azon'i Mirkadirov.
Anisan'ireo gadra politika malaza mbola hodinihan'ny filoha (ny fomba hamotsorana azy ireo) i Ismayilova, ny mpanao gazety Seymur Hezi, mpiaro ny zon'olombelona Intigam Aliyev, ny tanora mpikatroka Ilkin Rustemzade, ary ny lehiben'ny hetsiky ny mpanohitra REAL antsoina hoe Ilgar Mammadov.